Tillọ ọrụ fatịlaịza Granulator | China Fatịlaịza Granulator Manufacturers, Suppliers
Rotary Drum Granulator (nke a makwaara dị ka ịgba egwu, ịgba rotary pelletizer ma ọ bụ rotary granulators) bụ ezigbo ngwá ọrụ nwere ike ịhazi ọtụtụ ngwaọrụ. A na-ejikarị akụrụngwa eme ihe maka imepụta nnukwu fatịlaịza na oyi, na-ekpo ọkụ, na-adị elu ma na-adịkarị ala. Igwe ahụ nwere uru nke bọọlụ dị elu na-etolite ike, ịdị mma dị mma, nguzogide corrosion, obere ume ike na ndụ ogologo ndụ. Obere ike, enweghị atọ n'iyi orùrù, anụ ọrụ, adaba mmezi, ezi uche usoro layout, elu technology, ala mmepụta-akwụ ụgwọ. Rotary Drum Compound Fatịlaịza Granulators eji mgbe agglomeration - chemical mmeghachi omume usoro a chọrọ.
Na Ewepụghị Die Fatịlaịza Extrusion Granulator Machine na-bụ-eji maka granulating nke fatịlaịza, na nsogbu dị iche iche esichara site igwe nwere ezigbo na dị ọcha elu, agafeghị oke ekweghị ekwe, ala okpomọkụ mgbanwe n'oge usoro, na ike na-nri nke akụrụngwa nke ọma.
Ugboro abụọ ịghasa Extruding Granulator Machine nwere uru nke arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya, ọnụego granule na-akpụ, mgbanwe dị ukwuu maka ihe, obere okpomọkụ na-arụ ọrụ na enweghị mmebi nke ihe oriri. Ọ na ọtụtụ-eji pelleting nke ndepụta, fatịlaịza na ọrụ ndị ọzọ.